Ragii la sheegay in ay ka Dambeeyay Dil xalay dad shacab ah loogu geestay Muqdisho oo gacanta lagu dhigay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
MAREEG 20 April 2016
Wasaarada Difaaca oo ragii ka danbeeyay weerar xalay lagu dilay dad shacab ah ku wareejisay maamulka Gobolka banaadir.
Ciidamada Amaanka Dalka ayaa xalay gacanta ku dhigay askar katirsaneed ciidanka Dowladda oo xalay sadax qof oo shacab ah ku dilay Xaafada Warshada Caanaha ee Degmada Hodan.
Taliska ciidanka milatariga oo dhacdadan lagu wargaliyay ayaa ku guuleestay in ay gacanta kusoo dhigaan sadax askari oo falkan in ay ka dambeeyeen lagu tuhmayo, kuwaa oo durba lagu wareejiyay laamaha dambi baarista .
Afhayeenka gobolka Banaadir ayaa sheegay in gacanta lagu hayo laguna soo wareeiyay sadax askari oo katirsan ciidanka milatariga kuwaa oo xalay dad shacab ah ku dilay xaafada Warshada Caanaha ee degmada Hodan.